Sa’aa dheeraadhaaf taa’uun dhibee gosa addaddaaf nama saaxila - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Sa’aa dheeraadhaaf taa’uun dhibee gosa addaddaaf nama saaxila
Sa’aa dheeraadhaaf, yeroo heddu, taa’uun ykn lafatti hidhamuun madda rakkoo fayyaa hedduuti jedhu qorattoonni. Qorannoon University Health Network kan mirkaneesse guyyatti sa’aa dheeraadhaaf taa’uun dhibeee hedduuf nama saaxila. Carraan namni sa’aa dheeraadhaaf taa’u dhibee onnee, sukkaaraa fi kaansarii saaxilamuu guddaadha. Kan jechuun yeroo dheeraadhaaf taa’uun umrii nama gabaabsa, gara du’aatti nama tirsa.
Gadaa tanatti jiddugaleessatti namoonni heddun wolakkaa guyyaa hujii irratti kompiitara fundura, manatti ammoo TV afoo yeroo dheeraadhaaf taa’uun dabarsan. Kuni sa’aa dheeraadha. Rakkoon guddaan, namoonni akkanatti taa’aa oolan kun yeroo hedduun sochii qaamaa kan hin goone ta’uu isaati. Namoonni sochii qaamaa godhanis waa xiqqoo godhu- sochii qamaa isan godhanii fi sa’aan isaan taa’uudhaan dabarsan tasa wolhingitu. Sochiin sa’aa taa’umsaan dabreen wolhinmadaalle qaama hinjajjabeessu, akka dhibee addaddaa ufirraa faccisu hintaasisu.
Guyyatti daqiiqaa 30f shaakalanii eegasii sa’aa san irraa hafe taa’uudhaan dabarsuun qaamaaf gahaa kan hintaane ta’uu dubbata hoogganaan qorannoo kanaa Dr. Deevid Alter. Itti dabaluudhaanis, Dr. Alter, guutummatti taa’uu irra guyyatti waa yartuus taatu shaakaluun akka barbaachisuudha kan dubbatan.
Rakkoo kanaaf furmaanni maal akka ta’uu qabu qajeelatti beekuuf qorannoon dabalataa barbaachisaa ta’uu isaa eeru, qorattoonni. Ta’us, namni tokkko sa’aa 12 keessatti sa’aa 2 hanga 3f sochii qaamaa xixiqqaa godhuun akka irraa eegamu gorsan. Keessattuu bakka hujiitti namoonni daqiiqaa 30 keessatti daqiiqaa 2 ykn 3f ka’anii dhaabachuufi waajjiru keessa sosocho’uun faaydaa guddaa kan qabu ta’uu isaati kan dubbatan. Namni manatti TV ilaalus sa’aa meeqaaf osoo hinsochoone akka taa’aa ture hubachuudhaan mana keessa sosocho’uun kan irraa eegamu ta’uudha kan gareen qorannoo kuni akka fala yerootti eeran.
rakkoo sa'aa dheeraadhaaf taa'uu
Previous articleUmriin keessan 30 osoo hin gayin duroomuu feetuu? Qabxiilee saglan kanniin irratti hojjachuu eegalaa
Next articleBalaa tuulaa kosii Reephitti gayeen lubbuun galaafatame 65 gaye; achibuuteen isaanii kan hin beekamin ammoo heddu